जानकारी Archives | Page 12 of 15 | Nepali In Japan
जापानको माइ नम्बर कार्डबारे जान्नैपर्ने ११ तथ्य
जापानमा नयाँ ‘माइ नम्बर’ प्रणाली (सामाजिक सुर क्षा तथा कर नम्बर प्रणाली) लागू भैसकेको छ । विदेशी नागरिक र बालबालिका लगायत जापानका सबै नागरिकहरुलाई उनीहरुको आफ्नो १२ अङ्कको पहिचान नम्बर जारी गर्ने क्रममा यो कार्ड लागू गरिएको छ । कर तथा सामाजिक सुर क्षाजस्ता सरकारी कुराको प्रशासनिक प्रकृयामा कर्मचारी र र सर्वसाधारण दुवैको काम सजिलो बनाउने लक्ष्यसहित माइ नम्बर लागू गरिएको हो । कर छली तथा कल्याणकारी लाभको गलत प्रयोगमा रोक लगाउनु पनि यस कदमको अर्को महत्वपूर्ण लक्ष्य हो । तर माइ नम्बरबारे धेरै साथीहरुले प्रश्न गरेपछि आजको लेखमा माइनम्बरसंग सम्बन्धीत केही प्रश्न र जापान सरकारको क्याबिनेट सेक्रेटेरियटका सामाजिक सरक्षा सुधार विभागको पीआर सेक्सनबाट दिइएका उत्तरहरुका आधारमा यो जानकारी प्रस्तुत गरिएको छ । प्रश्न १ जापानमा बसिरहेका विदेशी नागरिकले आफ्नो कार्ड बोकेर हिँडुनुपर्ने नियम छ । माई नम्बर कार...
ट्रेन स्टेशनमा अल्मलिनुभयो ? यसो गर्नुहोस्
हालसालै जापान आएका व्यक्तिहरुलाइञ जापानमा आफ्नो गन्तव्यको सहि रुट पत्ता लगाउन धेरै मेहनत गर्नुपर्छ । एक स्टेशनमा झर्नुपर्ने व्यक्ति अर्को स्टेशन वा एउटा एक्जिटबाट निस्कनुपर्ने व्यक्ति अर्को एक्जिटबाट निस्केका अनुभवहरु प्राय सबैसंग छन् । विश्वका अधिकांश ठूला स्टेशन जापानमा भएका कारण यिनीहरुको एक्जिट पोइण्ट पनि अनगिन्ती हुन्छन् । यस्तो समस्यासँग जुझ्न यहाँ केही टिप्सहरु दिइएको छ । यो जानकारी विशेषगरि हालसालै जापान आएका र आउने तयारी गरिरहेका साथीहरुलाई सहयोग होस् भन्ने हेतुले लेखिएको हो । स्टेशन संकेतहरु जापानमा प्राय सबै ठूला स्टेशनहरुमा जापानी, अंग्रेजी, चिनियाँ र कोरियन भाषामा लेखिएका संकेतहरु हुन्छन् जसमा तपाइको गन्तव्यको सहि एक्जिट लेखिएको हुन्छ । यदि तपाइ कुनै लोकप्रिय स्थानमा नै जान लाग्नुभएको छ भने कुनै समस्याबीना नै संकेत हेरेर चाहेको स्थानसम्म पुग्न सक्नुहुन्छ । स्टेशनमा रहेको म्...
यि हुन जापानका सबैभन्दा महङ्गा फलफुल
६ लाखमा नेपालमा के–के किन्न सकिन्छ ? तर जापानमा भने सोही मूल्यको एउटा कालो खरवुजा मात्र किन्न सक्नुहुन्छ ! बसोबासका लागि जापान र यहाँका केही शहरहरु विश्वमै महंगा शहरहरुको सूचिमा पर्दछन् त्यस्तैगरि यहाँ फल्ने फलफुलको मुल्यले पनि वेलावेला विश्व बजारमा तहल्का मच्चाइरहन्छ । हो, आजको लेखमा जापानमा पाइने विश्वकै सबैभन्दा महङ्गा फलफुलबारे जानकारी दिने प्रयास गरिएको छ । ५. स्क्वायर वाटरमेलन जापानमा स्क्वायर वाटरमेलनको प्रति टुक्रा १५ हजार येन पर्छ । यो कुनै मजाक होइन र यो हाम्रो सूचीको सबैभन्दा सस्तो फलफुल हो । यी खरबुजालाई स्क्वायर आकार दिन विशेष प्रकारका क्युब केसमा हुर्काइन्छ । तर त्यसलाई काटेर हेर्दा भने यो अन्य खरबुजाजस्तै देखिन्छ । तर यीनिहरु काँचै विक्री गरिन्छ र यो स्वादभन्दा पनि यसको सजावटका कारण प्रख्यात छ । ४.ताइयो नो तामागो म्याङ्गोज सूचीमा समावेश अर्को फलफुल हो आँप । जापानमा ज...
16May By NIJ AdminNo Comments
जापानको ‘जाइर्यु कार्ड’बारे थाहा पाइराख्नुस् यि कुरा (भाग २)
जापानमा पढाई, व्यवसाय वा अन्य जुनसुकै कारणले आएपनि यहाँ सुल्झाउन पर्ने धेरै कुराहरु छन् । यसमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा त रेसिडेन्स कार्ड (जाइर्यु कार्ड) प्राप्त गर्नु नै हो । सन् २०१२ मा नयाँ रेसिडेन्सी व्यवस्थापन प्रणालीअन्तर्गत नयाँ रेसिडेन्सी कार्ड जारी गरिएको थियो । विदेशीहरुका लागि जापानमा बस्नका लागि रेसिडेन्स कार्डको धेरै नै महत्व हुन्छ । जापानको रेसिडेन्स कार्डका बारेमा थाहा पाइरहनुपर्ने १० तथ्यहरुको बारेमा केही समय पहिलेनै लेखिसकेका छौं । सो पोष्ट पढ्नका लागि यहाँ क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ । रेसिडेन्स कार्ड लामो समयसम्म जापान बस्नेहरुका लागि जारी गरिने रेसिडेन्सी कार्डमा कार्ड पाउनेको नाम जन्ममिति, जापानको ठेगाना, र भिसा स्टेटस प्रिण्ट गरिएको हुन्छ । रेसिडेन्सी कार्ड एउटा फोटो आईडी जस्तै हो र यसलाई जापानमा पहिचानका रुपमा प्रयोग गरिन्छ । १६ वर्ष माथिका सबै नागरिकले आवश्यक परेको खण्...
8May By NIJ AdminNo Comments
जापानमा निःशुल्क पाइन्छन् यि चिज
जापानी सडकमा हिडिँरहेका बेला होस् वा रेष्टुराँमा बसिरहेका बेला केही कुराहरु निःशुल्क वितरण भइरहेको देखिन सकिन्छ । आजको लेखमा जापानमा कुनै हिच्किचाहटबीना निःशुल्क वस्तु कसरी पाइने भन्ने बारे जानकारी प्रस्तुत गरिएको छ । यो जानकारी विशेषगरि हालसालै जापान आएका र जापान आउने तयारी गरिरहेकाहरुका लागि हो । जापान आएर लामो समय बसिसक्नुभएको छ भने यि कुरा तपाईका लागि सामान्य कुरा हुन् । :) १.पानी जापनको कुनै रेष्टुराँ होस् वा खानेकुराको कुनै सामान्य स्टल, त्यहाँ खानेपानी निःशुल्क उपलब्ध गराइन्छ । रेष्टुराँमा गएर बस्ने वित्तिकै त्यहाँ एकजना वेटरले तपाइलाई बरफसहितको सफा चिसो पानी ल्याएर दिन्छ । खानेकुराका जुनसुकै स्टलमा पनि यस्तै अभ्यास गरिन्छ । आफूले खरिद गरेका वस्तुसँगै आफूलाई चाहिएजति पानी निःशुल्क पिउन सकिन्छ । त्यसको कुनै बिल तिर्नु पर्दैन । २. खानापछिको तातो चिया जापानमा वेलकम ड्रिङ्कका रुपमा ...
जापानको ट्रेन सिस्टम बुझ्नुभएको छैन ? यसो गर्नुहोस्
जापान आउने विदेशी पर्यटकहरु प्राय त्यहाँको रेलवे स्टेशनमा रहेको टिकट काउण्टरमा अलमलमा परिरहेका देखिन्छन् । त्यसो त जापान आएको सुरुवाती दिनहरुमा ट्रेन स्टेशनमा हराउने, एउटा ट्रेन चढ्नुपर्नेमा अर्को चढ्ने लगभग सबैले व्यहोरेकै कुरा हो । जापानी भाषा नबुझ्ने विदेशीहरुका लागि रेलको टिकट काट्नु सबैभन्दा कठिन कार्य बन्न सक्छ । यस्तोमा सुइका वा पास्मो कार्डको प्रयोगबाट समयकोे वचत गर्न र समस्यामा पर्नबाट पनि जोगिन सकिन्छ । यी कार्डबारे जानकारी नभएकाहरुलाई आजको लेखबाट यसको फाइदाबारे जानकारी गराउने प्रयास गरिएको छ । सुइका र पास्मो भनेको के हो? सुइका र पास्मो कार्डबाट नगदरहित भुक्तानी गर्न सकिन्छ । यदि यी दुईमध्ये एक कार्ड तपाइसँग छ भने तपाइले टिकट खरिद नगरिकनै बस र रेलको यात्रा गर्न सक्नुहुन्छ । यसबाहेक यस कार्डको प्रयोगबाट रेजिष्टर भएका खुद्रा विक्रेताको मा गएर खरिरदारी पनि गर्न सकिन्छ । सुइका र प...
6May By NIJ AdminNo Comments
जापानी स्वास्थ्य सुरक्षा प्रणाली अन्तर्गतको ‘युनिभर्सल हेल्थ इन्स्युरेन्स कभरेज’ मा जापानी नागरिक, स्थानी रेसिडेण्ट्स र जापानमा बस्ने गैर जापानी नागरिक सबैले सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध हुनैपर्छ । यदि तपाइ कर्मचारी हो र कार्यालयबाट अन्य कुनै बीमामा आबद्ध हुनुहुन्छ भने अर्कै कुरा नत्र 'राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा' (एनएचआई) मा अनिवार्य रुपमा आबद्ध हुनै पर्छ । एनएचआईको सदस्य बनीसकेपछि एनएचआईले तोकेको कर (प्रिमियम) पनि तिर्नै पर्छ । कसलाई राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा अनिवार्य छ ? – जापानमा बस्ने सम्पूर्णले स्वास्थ्य बीमा गरेको हुनैपर्छ । कम्पनीका कर्मचारी र अन्य सरकारी कर्मचारीको कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा वा आपसी सहयोग बीमा गरिएको हुन्छ भने अन्य नागरिकको चाहिँ एनएचआई हुनै पर्छ । त्यस्तै केही विशेष कारणबाहेक जापानी भिसा भएका र तीन महीनाभन्दा बढी जापान बसेका गैर जापानी नागरिकले पनि यो बीमा गर्नैपर...
जापानी नोटमा देखिने व्यक्तिहरु को हुन् ?
जापानी पैसालाइ येन भनिन्छ । बजारमा देखिएका र प्रयोगमा आएका जापानी सिक्काहरु १, ५, १०, ५०, १०० र ५०० का छन् । कागजी नोटमा अहिले चलनचल्तीमा आएको नोटहरु १ हजार २ हजार ५ हजार र १० हजारका हुन्छन् । पहिलेपहिले चलनमा आउने गरेको १०० येन र ५०० येनको पनि नोट देखिन्छ । तर खासै आजभोलि प्रयोगमा भने आउँदैनन् । सन् २००४ ताका प्राविधिमा आएको विकासँगै जापानले आफ्ना नोटहरुमा पनि परिवर्तन ल्यायो । होलोग्राम, वाटरमार्क र नक्कल हुनबाट रोक्न विशेष किसिमको मसीको प्रयोग गरेर नयाँ नोट बनाइयो । आजको पोष्टमा हामी तिनै नोटमा रहेका चित्रहरुको वारेमा जानकारी दिदैछौं । एक हजार येनको नोटः Hideyo Noguchi (1876-1928) एर्जावान मानवताका निम्ति चुनिएका हिडेयो नोगुचीले आफ्नो मेडिकल करियरलाई जण्डिस रोगको रोकथाममा समर्पित गरे । रकफेलर फाउण्डेशनको सहयोगमा घानामा अनुसन्धान गर्न जाने क्रममा जण्डिस सरेर उनको मृत्यु भयो । त...
5May By NIJ AdminNo Comments
नेपालमा जाँदा लागेको उपचार खर्च कसरी दाबी गर्ने ?
जापानमा रहेका हरेक विदेशीहरुको स्वास्थ्य विमा हुनुपर्ने अनिवार्य नियम छ । जापानको राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा के हो र यसका फाइदाहरु के–के छन् भन्ने बारेमा केही पहिलेनै हामीहरुले लेखिसकेका छौं । त्यो जानकारी पढ्नुभएको छैन भने यही पोष्टको अन्त्यमा त्यसको लिंक छ गएर पढ्नुहोला । यदि तपाई जापानको राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा (कोकुमिन केन्कोउ होकेन) को सदस्य हो र इन्स्योरेन्स बापतको रकम नियमति तिरीरहनुभएको छ भने चाहिँ विदेशमा हुँदा वा भनौ नेपालमा गएको समयमा केही भइहालेमा गरेको उपचारमा भएको मेडिकल खर्च यसले बेहोर्छ । यसलाई ओभरसिज मेडिकल ट्रिटमेण्ट बेनेफिट क्लेम भनिन्छ । ओभरसिज मेडिकल ट्रिटमेण्ट बेनेफिट क्लेम विदेशमा भएको मेडिकल उपचारको खर्च बेहोर्न तिरिने रकम नै ओभरसिज मेडिकल ट्रिटमेण्ट बेनेफिट हो । यस्तो खर्च जापानमा राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमाले दिने स्वास्थउपचार बराबर हुन्छ र यस्तो लाभको मूूूूूल्य जाप...
1May By NIJ AdminNo Comments
यदि तपाइलाई सधैं जसो कुनै न कुनै औषधीको जरुरत पर्छ र त्यो तपाइ जहाँ गएपनि नभई हुँदैन भने जापान आउँदा त्यसरी व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि औषधी ल्याउने केही नियमहरुबारे जान्न जरुरी छ । आफूले प्रयोग गर्नेे औषधी यहाँ ल्याउनु अघि सो नियमबारे जानकारी हासिल गर्नु अति आवश्यक छ । जापानको स्वास्थ्यसेवा प्रणाली जापानको स्वास्थ्य सेवा प्रणाली अन्य देशको भन्दा राम्रो र विकसित छ । यद्यपि चिकित्सकको सल्लाह र सुझाव लिन जापानी भाषाको ज्ञान हुनुपर्ने भएकाले विदेशीहरुका लागि अलि समस्या हुनेगरेको छ । यद्यपि केही ठूला शहरमा भने केही अंग्रेजी जान्ने चिकित्सकहरु पनि हुन्छन् । सो बारे जानकारी यो लिंकमा क्लिक गरि पढ्न सक्नुहुन्छ । जापानमा रहेका धेरै साथीहरुले म्यासेजमा यस विषयको जानकारी सोधेकाले व्लगकै रुपमा लेख्ने जमर्को गरिएको हो । यहाँ दिइएका सबै जानकारीहरु इन्टरनेटमा प्राप्त सूचनाका आधारमा लेखिएको हो । जापानम...
30Apr By NIJ AdminNo Comments
कोरियन, चिनियाँ र जापानी कसरी छुट्टयाउने ?
कुनै मानिसको बाहिरी आवरणबाट कुन राष्ट्रको नागरिक हो भनेर अनुमान लगाउन सकिन्छ ? उसको कपाल, अनुहारको आकृति, उसले लगाएका लुगा र उसको बोलीबाट भने केही अनुमान गर्न सकिन्छ । तर जापानमा भने यो अलिकति गाह्रो छ । जापानी, चिनियाँ र कोरियनहरुलाई सबैले एकजस्तै मान्छन् । धेरैले जापान आएका कोरियन र चिनियाँ नागरिकलाई पनि जापानी नै ठान्ने गल्ती गर्छन् । जापान आएको अलि लामो समय भैसकेको छैन भने तपाई पनि झुक्किनुभएको छ होला । वर्तमान समयमा एउटा देशको नागरिकलाई अर्कै देशको भन्ठान्नु कुनै अपराध नभए पनि केही साधारण कुरालाई ध्यानमा राखेर थोरै समयमा नै जापानीलाई कोरियन र चिनियाँ नागरिकबाट छुट्टाउन सकिन्छ जसले अनौठो परिस्थितीमा आफू पर्नबाट जोगाउँछ । आजको लेख यी तीन देशका नागरिकबीचको समानता र भिन्नतामा केन्द्रित छ । जापानी, कोरियन र चिनियाँ मानिसको उत्पत्ति यी तीन देशका नागरिकको उत्पत्तिमा धेरै नै भिन्नता छ...
29Apr By NIJ AdminNo Comments
जापानमा फाहोर र थोत्रा सामानको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ?
विश्वका अधिकांश राष्ट्रमा फोहोरको उचित व्यवस्थापन भएको पाइँदैन । फोहोर त फोहोर नै यसलाई जता फाले पनि के नै फरक पर्छ र भन्ने अधिकांशको सोच रहेको पाइन्छ । केही राष्ट्रमा भने फोहोरबाट मोहोर बनाउने काम पनि भएका छन् । थोत्रा सामानलाई नयाँ रुप दिएर प्रयोग गरिएका उदाहरणहरु प्रशस्तै छन् । थोत्रा सामान तह लगाउने र फोहोर व्यस्थापन गर्ने यो भन्दा पनि सजिलो र थोरै समय मात्रै लाग्ने प्रकृयाबारे आज यो लेखमा बताउने प्रयास गरिएको छ । जापानको फोहोर व्यवस्थापन र विभाजनको सटिक तरिका देखेर अधिकांश छक्क पर्न सक्छन् । थोत्रा चीजको रिसाइकल गर्ने जापानी तरिका भिन्न छ । यस्तो प्रकृया शहरैपिच्छे फरक भएपनि सामान्य नियममा भने धेरै समानता रहेको पाइएको छ । यस लेखले जापानमा फोहोरको सहि विभाजन कसरी गर्ने र यसका के के नियम छन् भन्ने जानकारी दिन्छ । फोहोर विभाजनका लागि प्रकार जापानमा साधारणतय : फोहोरलाई चार ओटा प्रका...
गोल्डेन वीक के हो ? किन यति लामो विदा हुन्छ ?
हरेक वर्ष हजारौं यात्रुहरु जापानको सुनौलौ सप्ताह अर्थात 'गोल्डेन वीक'मा सहभागीता जनाउने प्रयास गर्छन् । गोल्डेन वीक जापानको लामो विदामध्येको एक हो र ‘गोल्डेन वीक होलिडे’ पिरियडमा यहाँका जुनसुकै स्थान पनि व्यस्त देखिन्छन् । अधिकांश जापानी यो छुट्टिमा व्यवसायिक लाभ उठाउने प्रयासमा हुन्छन् । यस्तो समयमा पर्यटकहरुले आफ्नो व्यक्तिगत स्पेसका लागि कडा प्रतिस्पर्धा नै गर्नु पर्ने हुन्छ । सिमित बजेटमा यात्रा गर्ने पर्यटकका लागि पहिल्यै डरलाग्दो रहेको जापानी होटलको भाउ यो समयमा झन् बढ्छ । जापानमा बसन्त मौसम पनि धेरै नै रमाइलो हुन्छ । तर यदि अलि बढी रकम खर्चिएर यात्रा गर्ने, रेलको भीडभाडको अनुभव गर्ने र टिकट किन्न र वरिपरिको दुश्यावलोकन गर्न लाइनमा घण्टौं कुर्न तयार हुनुहुन्छ भने चाहिँ गोल्डेन विक उपयुक्त समय हो । गोल्डेन वीक के हो ? अप्रिलको अन्तिम र मेको पहिलो हप्तामा पर्ने चार ओटा लगातार सरका...